Kazakhstan: Tsy Ankasitrahana Ny ‘Fitsabahan’ny’ Tandrefana Any Amin’ny Raharaham-pitsarana · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 28 Septambra 2012 9:12 GMT
Tamin’ny volana Desambra 2011 lasa teo, nanafintohina an’ilay firenena zatra filaminana teo aloha izay tsy iza fa i Kazakhtan, ny fiafaran’ny grevin’ny mpiasan’ny solitany izay naharitra 7 volana, nisiana fahafatesan'olona tao Zhanaozen akaiky ny Ranomasina Kaspianina. Niteraka tsikera marobe avy amin’ireo mpanaramaso iraisam-pirenena ny valy bontana nataon’ny governemanta tamin'ny fihetsiketsehana sy ny fitsarana nanaraka izany izay nahatafiditra mpanao fihetsiketsehana sy polisy, ary tsarany fa manao izay hamotehana ny endrika fanoherana rehetra ny governemanta ary manadio tena.
Eo an-dàlana ankehitriny ny raharaham-pitsarana farany mahatafiditra an'i Vladimir Kozlov, lehiben’ny antoko mpanohitra Alga tsy voasoratra ara-dalàna, voampanga ho nitarika ny fanoherana niaraka tamin’ireo mpitarika grevy roa hafa.
(Efa nitatitra mikasika ny raharaham-pitsarana izay nofaritan’ireo mpiserasera Kazakhstanita ho toy “ny Pussy Riot azy ireo manokana” ny Global Voices Online.)
Anisan’ny fiampangana lehibe hanenjehana an’i Kozlov ny fifandraisany amin’i Mukhtar Ablyazov. Mpifanandrina taloha tamin’ny filoha Nursultan Nazarbayev i Mukhtar Ablyazov. Miafina any Eoropa izy ankehitriny ary karohin’ny manampahefana Kazakh sy Britanika. Na dia eo aza ny tantara mifamahofaho, nanambara ny manampahefana Kazakhstanita fa vola 500 tapitrasa US dolara no nangalarin’i Ablyazov tamin’izy nitantana ny ny banky goavana indrindra tao amin’ny firenena, fiampangana nahatonga azy ho ratsy laza ao Kazakhstan.
Raha nanameloka ny raharaham-pitsarana ny lehiben’ny mpanohitra Kozlov ho tsy rariny ny fikambanana ONG tandrefana sy ny mpanao gazety, nangoraka ity lehilahy ity ny bilaogera Kazakhstana. Ankoatra ireo mpanohana mivantana an’i Kozlov sy ny antokony, dia saiky manohana ny governemanta amin’ny tsy maintsy hitsarana sy hanamelohina azy [Kozlov] kosa ny ankamaroan'ny feo.
Ohatra, bilaogera malaza Kazakhstanita Yaroslav Krasiyenko (aka MontKristov) namoaka lahatsoratra mitondra ny lohateny hoe ‘Dr. Freedom House, who are you to [word omitted] lecture me (Dr. Freedom House, iza ianao no [teny nesorina] manome lesona ahy?‘ [ru], fa ny iray amin’ireo mpitsikera mafy indrindra ny fitsarana, manala baraka ny tenany ny fikambanana ONG Freedom House noho ny fiankianandohany amin’ny fanampiana ara-bola avy amin’ny governemanta Amerikana:
Bilaogera Anara (Bazanara), izay nanatrika ny fotoam-pitsarana, nanoratra [ru] tsikera momba ireo mpanaramaso avy any ivelany:
Ho valin’ilay lahatsoratra tao amin’ny Google Plus mitondra ny lohateny ‘Is Kazakhstan the new Uzbekistan (Uzbekistan vaovao ve i Kazakhstan)?‘, fehezanteny tao amin’ny baiboly no namalian’ilay mpisera Twitter Kairat izany: